Pramiracetam အမှုန့် (68497-62-1) hplc≥98% | AASraw Nootropics
/ ထုတ်ကုန်များ / Nootropics အမှုန့် / Pramiracetam အမှုန့်
SKU: 68497-62-1. အမျိုးအစား: Nootropics အမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Pramiracetam မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (68497-62-1) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Pramiracetam အမှုန့် ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအကူအညီပေးနေသည်ဟု၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ဖို့ပဏာမသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူသိမြင်မှုတိုးမြှင့်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒြပ် racetam ဆင်းသက်လာသည်။ ယင်းယန္တရားအားလုံးမှာကောင်းစွာမသိရသော်လည်းသူက acetylcholine ပေါင်းစပ်မြှင့်တင်ရန်ပေလိမ့်မည်။
ကုန်ကြမ်း Pramiracetam အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Pramiracetam အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 45.0-49.0 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
SMART မူးယစ်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Pramiracetam အမှုန့်
Coluracetam (MKC-231) တစ်ဦးသိမြင်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်မူးယစ်ဆေးဖြစ် purported တစ် racetam မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့မဟုတ်ရင်ချို့ယွင်းကြသောအခါတွင် neuron သို့ choline လွှာမှကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပေမယ့်လက်ရှိမွေးရာပါ nootropic သက်ရောက်မှုမရှိသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Pramiracetam အမှုန့်အသုံးပြုမှု
လောလောဆယ်လူသားများအတွက် Pramiracetam အမှုန့်ကိုသုံးပြီးသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုခု 400mg သုံးကြိမ်နေ့စဉ်သို့မဟုတ် 600mg နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်အသုံးပြုသည်, ဤအထိုးတပ်ရင်းနှစ်ခုလုံးနေ့စဉ် Pramiracetam မှုန့် 1,200mg စုစုပေါငျး။
Pramiracetam အမှုန့်အစားအစာများနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်ဆိုပါကဒါဟာမသေချာကြောင်း, 1,200mg အကောင်းဆုံးသောက်သုံးသောဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်မပါလျှင်သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ဤသည်, သို့သော်, ထိရောက်သောပေါ်လာပါဘူးပါဘူး။
အဘယ်အရာကိုရလဒ်များအမျိုးအစားများငါရော် Pramiracetam အမှုန့်ကနေမျှော်လင့်နေရမည်
Pramiracetam အမှုန့်ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သိသိသာသာသိမြင်မှုတိုးတက်မှု, ပေးပါသည်။
ဒါကြောင့်မကြာခဏစိတ်ခံစားမှုတုံးတစ်အချို့ငွေပမာဏနှင့်အတူအာရုံတစ်ခုသိသာခံစားမှုဖန်တီးသောကြောင့်, က Ritalin နှိုင်းယှဉ်မကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း Pramiracetam မှုန့်အများဆုံးကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုအကျိုးကျေးဇူးများကိုအချို့သည်နေသောခေါင်းစဉ်:
တိုးတက်မှတ်ဉာဏ် - က hippocampus ကိုလှုံ့ဆျောသောကြောင့်, အသစ်သောအမှတ်တရများ၏ဖန်တီးမှုအတှကျအဓိကတရားခံကဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်, Pramiracetam ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်မှတ်ဉာဏ် Enhancer အဖြစ်လူသိများသည်။ အများစုမှာအသုံးပြုသူများကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်း၏မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်မြန်နှုန်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှု, တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအားဖြင့် corroborated ခဲ့ပြီးတစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုသတင်းပို့ပါ။
Expanded သင်ယူစွမ်းဆောင်ရည် - အသုံးပြုသူများ Pramiracetam အမှုန့်ပိုမိုလွယ်ကူ, ပိုမိုမြန်ဆန်သင်ယူခြင်းနှင့်ထို့ထက် ပို. ပျော်စရာစေသည်သတင်းပို့ပါ။ ဤသည် သာ. ကြီးမြတ် neuroplasticity ၏ Pramiracetam အမှုန့်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအားဖြင့်အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Alert နှင့်ရှင်းလင်းမှု - ပုံမှန်အားဖြင့်သုံးစွဲသူများကို Pramiracetam အမှုန့်ကိုယူပြီးသူတို့ကိုစိတ်ရွှင်လန်း, အာရုံ, လျင်မြန်စိတ်ကူးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်၏အားကြီးသောခံစားချက်များကိုပေးသည်ကသတင်းပို့သည်။
လူမှု fluency - အတော်များများကအသုံးပြုသူများအ Pramiracetam ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူပြီးသူတို့ကိုလူမှုရေးလျှော့ချရသော, ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အပြည့်အဝလူမှုရေးအခြေအနေများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, ဖွယ်ရှိဖြည့်စွက်မယ့်ခြုံငုံဦးနှောက် function ကို optimization နှင့်ဆက်စပ်သောသောအကျိုးအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှု blunting သက်ရောက်မှုမှအတန်ငယ်ဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကူညီပေးသည်ဟုပြော စိုးရိမ်စိတ်။
တိုးတက်အာရုံခံအမြင် - အသုံးပြုသူများမကြာခဏ amplified နှင့်ချမ်းသာသောအသံများနှင့်ရှင်းလင်းနှင့်ပိုမိုအရောင်ဆနျ့ကငျြဘနှင့်အတူပိုပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအမြင်အာရုံအမြင်အပါအဝင်တိုးမြှင်သို့မဟုတ်တိုးတက်အာရုံခံသဘောထားအမြင်, သတင်းပို့ပါ။
မှတ်ဉာဏ်ပြုပြင်ခြင်း - ကန့်သတ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ Pramiracetam အမှုန့်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အခြားမှတ်ဉာဏ်ပြဿနာတွေများအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစမှတ်ဉာဏ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အခြားအာရုံကြောချို့ယွင်းတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသမှုအဖြစ် US မှာစမျးသပျခဲ့သောအမျိုးမျိုးသော nootropics တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအပင်ကအသက် 18-65 နှစ်ပေါင်းထံမှကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ဓာတုဗေဒသွေးဆောင်သတိမေ့ခြင်းစကြရအောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပြသခဲ့သည်။
ဘယ်လိုကုန်ကြမ်း Pramiracetam အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
အများဆုံး nootropics ကဲ့သို့ပင် Pramiracetam အမှုန့်, တယောက်ကိုတယောက်အာရုံကြောဆဲလ်ကနေအချက်ပြထုတ်လွှင့်ကြောင်းဦးနှောက်ဓာတုပစ္စည်း neurotransmitters များလွှတ်ပေးရန်သက်ရောက်သည်။ သို့သော် Pramiracetam အမှုန့် racetam ဖြည့်စွက်၏ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ရပ်များကနေအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ထုံးစံ၌, သွယ်ဝိုက်မနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာတခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆျော။
piracetam, Noopept နဲ့တခြားလူကြိုက်များ nootropics မတူဘဲ, Pramiracetam ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အစားဒါဟာဖက်တီးအက်ဆစ်မှတဆင့်သွေးကြောထဲသို့စုပ်ယူဆိုလိုတာကရေတွင်ပျော်ဝင်ထက်တွင်ပျော်ဝင်နေသောအဆီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့် 30 မိနစ်အတွင်းမှာအတော်လေးလျင်မြန်စွာအထွတ်အထိပ်ပြင်းအားနှင့်အမြင့်ဆုံး bioavailability ရောက်ရှိ, ထိုသို့ 4-6 နာရီတစ်ဦးအတန်အသင့်ရှည်လျားဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်။
အများစုမှာ racetams တိုက်ရိုက်တိကျတဲ့ neurotransmitter အဲဒီ receptor က်ဘ်ဆိုက်များကိုနှိုးဆွခြင်းနှင့်အရှင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် neurotransmitters ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ်ပေမယ့် Pramiracetam အမှုန့်ကိုတိုက်ရိုက် neurochemical အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ပါဘူး, ထိုသို့မဆိုအဓိက neurotransmitter တစ်ခုဆှဖှေဲ့ရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါဘူး။
၎င်း၏အဓိကတိုက်ရိုက်အရေးယူသည့် hippocampus အတွက်မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ choline လွှာမှ, ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှအရေးပါသည့်ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသိသိသာသာတိုးဖြစ်ပါသည်။
Choline acetylcholine တစ်ဦးရှေ့ပြေး, သင်ယူမှုအမြန်နှုန်း, မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအပါအဝင်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အလှနျပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်။
choline လွှာမှလှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့်, Pramiracetam ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သွယ်ဝိုက် acetylcholine များလွှတ်ပေးရန် modulates နှင့် hippocampus အတွက်တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်။ ဦးနှောက်၏ဤအပိုငျးမှတ်ဉာဏ် function ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်သောကြောင့်, Pramiracetam အမှုန့်ဖန်တီးသောယေဘုယျဆွအသစ်သောအမှတ်တရများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ရည်ညွှန်း၏ retention ကိုသို့မဟုတ်ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်နှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ hippocampus အတွက်တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းရွှင်လန်းပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်အထွေထွေအတွင်းမှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်နှောက်သွေးစီးဆင်းမှု, တိုးပွားစေပါသည်။
Pramiracetam ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အဖြစ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ချက်ကအခြားယန္တရားများရှိနိုင်ပါသည်။ သုတေသီများကဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအပြင်၌, Pramiracetam အမှုန့်သည့် adrenal ဂလင်းအပေါ်အားကိုးသောဦးနှောက်ပြင်ပရှိအရံက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ပြုမူသည်ဟုတွေးဆကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ Pramiracetam အမှုန့်ကိုလည်းဆဲလ်အချက်ပြနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ထားတဲ့ဦးနှောက်အမြှေးပါးလျော့ပြေ, တိုးမြှင့သို့မဟုတ် restore စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
များစွာသောအခြား racetam လူတန်းစား nootropics မတူဘဲ, Pramiracetam ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တက်ကြွစွာနိုးနိုးကွားကွားသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များဖြစ်စေပြောင်းလဲပစ်ရန်ပေါ်လာပါဘူး။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော serotonin, ဂါဘမြို့သားများနှင့် dopamine အဖြစ်စိတ်ဓါတ်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ဆင့်အပေါ်အကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်ရှိသည်သော neurotransmitters ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ချိအပေါ် Pramiracetam အမှုန့်ရဲ့ကန့်သတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။
Pramiracetam အမှုန့်ဟာ racetam-class ကိုဖြည့်စွက်မဆို၏အကြီးမြတ်ဆုံးအာနိသင်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, မရရှိနိုင်ပါဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ nootropics တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏ထူးခြားသောအရေးယူစွမ်းရည်, အာရုံနှင့်ပင်အာရုံခံအမြင်သင်ယူခြင်း, မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်အောင်, ခြုံငုံဦးနှောက် function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။
ဒါဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အခြား nootropics တစ်ခုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောထို့အပြင်နိုင်ပါတယ်, ၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့။
လျှင်မြန်စွာကျောင်းသားများ, စာရေးဆရာများ, သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ပူးတွဲတင်ပြထားစိတ်ဝင်စားသောသူမည်သူမဆိုအတူအကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာ, Pramiracetam အမှုန့်လူအတော်များများမှအသစ်ဖြစ်၏သို့သော်ထူးချွန် nootropic အဖြစ်ကောင်းစွာ-ရရှိခဲ့သည်အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိရန်စတင်နေပါတယ်။
Pramiracetam အမှုန့်ဟာ 1970s အတွက်ပန်းခြံ-Davis ကများကရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, piracetam တစ်ဒြပ်ဆင်းသက်လာသည်။ ဒါဟာ 5-30x ထံမှ piracetam ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ဖြစ်ခန့်မှန်းခြေတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်ဖြည့်စွက်သည်။
ဒါဟာအမှတ်တံဆိပ်အမည်များ Neupramir, Pramistar နှင့် Remen အောက်မှာဥရောပ၌ရောင်းခြင်းနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အခြားအာရုံကြောအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ dyslexia, ADHD, စိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာများ၏ကုသမှုများအတွက်အဲဒီမှာသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ 1979 အတွက်အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်ခံခဲ့ရပေမယ့်မဆိုအထူးသဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက် USFDA ကအတည်ပြုပေးမထားပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကျယ်ကျယ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်ဆက်စပ်သိမြင်မှုပြဿနာတွေနဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အလားအလာကုသမှုအဖြစ်လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ဒါဟာအစဗဟိုအာရုံကြောစနစ်မမှန်အမျိုးမျိုးများအတွက်ကုသမှုအဖြစ်ကိုလေ့လာလျက်ရှိသည်။
Pramiracetam ကုန်ကြမ်း Powder
Pramiracetam ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း
ကုန်ကြမ်း Pramiracetam အမှုန့်စျေးကွက်
ကုန်ကြမ်း Pramiracetam အမှုန့်မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
Pramiracetam အမှုန့်ကိုပင်မြင့်မားသောဆေးညွှန်းမှာများသောအားဖြင့်ကောင်းစွာသည်းခံသည်, အလွန်နည်းပါးဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။
အမြားဆုံးဖော်ပြခဲ့သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသောအားဖြင့်တစ်ဦး choline ဖြည့်စွက်နှင့်အတူကယူခြင်းအားဖြင့်တားဆီးနိုင်သည့်တစ်ဦးခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကွောသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု၏အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ခံစားချက်များကိုအပါအဝင်လျော့နည်းဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ယေဘုယျအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးသောက်သုံးသောနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်နှင့်, ဒါကြောင့်, သောက်သုံးသောလျှော့ချခြင်းဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
Pramiracetam အမှုန့်ကို non-စွဲလမ်းဖြစ်ပြီး, ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းမျှသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ဒီဖြည့်စွက်ပင်ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိဦးနှောက်အိုမင်းအတွက် function ကို restore စေခြင်းငှါသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
AASraw ထံမှ Pramiracetam အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
68497-62-1 Pramiracetam အမှုန့် AASraw HNMR
Nootropic Pramiracetam အမှုန့်: အကျိုးခံစားခွင့်, သောက်သုံးသော, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး